Tplf tarsiimoo imaammata sammicha fi ummata burjaajessaa jira. Kutaa 2faa
Falmataa Oromoo 07/01/2013
Akkuma yeroo darbee ibsamee turettii imaammata kijibaa kan TPLF qabatee deemaa jiru inni 2ffan hojii umuu fi small micro interpris dha. TPLF akkuma beekamu midiyaa isaatiin guddina sadarkaa sadarkaan galmeessa jirra, yeroo ammaa kan dhibbantaa 11 guddanneerra jechuun kan ummati keenya beelaan dararamaa jiruuf fala barbaaduu dhiisee, miidiyaa qabatee kijibaa oola. Guddina kijibaawaa akka TPLF odeessus bara 2004 ummata oromoo qofa osoo hin taanee addunyaa guutuun baree taa'e, bara 2004 TPLF guddina 10% daballee jirra jedhee yemmuu inni miidiyaan dabarsaa turetti, oromoonni booranaafi gujii beelaan dhumneerra, hongeen nu fixe jechuun dhaabbilee gargaarsaa kanneen akka fannoo diimaa gargaarsa kadhachaa akka turee fi lubbuun kumaatamaan lakkaawwamu beelaan akka darbeefi nammoonnii kumaatamaan lakkaawwaman biyyoota ollaa akka keeniyaa, jibuutiitti akka godaanaa turan ragaan world migration addunyaa mirkaneessa ture.
Yeroo ammaa kana tplf hojii umaa jira osoo hin taane namoota hojii qaban hojii hiiksisaa akka jiru hubatameera. Dhimmuma kanaan walqabsiisee keessumaa ummata oromoo irraan miidhaan tplf ga'aa jiru daran cimaa deemaa jira. Miidhaa ummata Oromoo irra ga'aa jiru kanas mata duree gurguddoo 4 tti qoodamu 1 qoteebulaa 2 daldalaa 3 bartaa 4 hojjettoota motummaati 1 rakkoo TPLF qotebultoota irraan ga'aa jiru; yeroo ammaa kana qoteebulaan keenya gidiraa fi hacuuccaa hagana jedhamee tilmaamuu isaa nama rakkisu jalatti kufee jira. keessumaa xaa'oo dhaan kan walqabate, TPLF qotee bulaan kam iyyuu xaa'oo akka fudhatu dirqisiifameeti malee fedhiin miti. Dhuma bara 2004 irratti qotee bulaan xaa'oo fudhachuu
hin dandeenya mana hidhaatti guuramaa ture. Xaa'oo fudhachuu dhiisuun yakka jechuun ummati dararamaa ture. Garuu hanga yoonaatti labsiidhaanis ta'e seera adaba yakkaa ethiopia irratti xaa'oo fudhachuu dhiisuun yakka jedhamee barreeffamee hin jiru. Kanaaf qotebulaan keenya TPLF 'n tuffachuun seeraan ala hidhamaa fi doorsifamaa jira. Xaa'oo dhuma kanaan walqabatee ummanni keenya beenyaa kuufatee jiru yeerro malee TPLF gurgursiisee hiyyummaa barabaraa keessatti qotee bulaa keenya kuffisaa jira.
Bara dargiitii kaasee haga bara 2003 tti qoteebulaan xaa'oon gatii gadi'aanaatiin liqa kennama ture. Qoteebulaanis beenyaa harka ofii isaa keessaa osoo hin baasin waggaatti liqa kana of irraa baasa, gatiin xaa'oos yoo olka'e qarshii 200-300 ture, kan raabsamus fedha malee dirqama hin turre guru bara 2004 tti qotee bulan xaa'oo fudhachuun sooressa hiyyeessa osoo hin jedhin dirqama, yakka, gatiin xaa'oo liqa osoo hin taanee dirqama harkatti kaffalama, gatiin xaa'oo 1200-1400 tti olka'e. Walumaagalatti ummata keenya xaa'oodhaan wal qabsiisee TPLF'n hiyyumma bara baraa jalatti kuffisaa jira.
Karaa biraatíin gabaa irra kan bitaman kanneen akka; ashaboo, sukkaara, zayita, gaasii ,huccuu fi kkf kan wal qabate TPLF 'n qotee bulaan baasii humnaan olii akka baasu godhee jira. Sababi isaas TPLF gibira humnaan olii daldaltoota irratti gadi buusee jira keessuma daldaltoota biyya alaati dhiyeessanii fi biyya keessaa irraatti yeroo addaa addaatti labsii gibiraa humnaa olii baasaa bula fkn businness income tax, exis tax, value added taxi, rental tax, fi kkfa persenti guddaa dhaan daldaltoota waan kaffalsiisuuf daldalaan gatii guddaan ummataf dhiyeessa jira akka fakkeenyaatti sukkaarri kiiloon tokko qarshii 35 zayiti litriin tokko qarshii 28-33 gidduutti gurguramaa ture.
Ol ka'insi gabaa kun kan ta'eef taxi baay'ee wan ol ka'ee fi dha. Garu TPLF labsii gibiraa kana fooyyessuu dhiisee, ofii isaati hojii daldalaa irratti bobba'ee jira yeroo ammaa kana. Yeroo ammaa kana sukkaara, zayitaa fi kkf kan daldalaa jiru motummaa dha. innis gati ol ka'en sirreessa jechuun TPLF biyya alaatii ummataaf dhiyeessa jira. Fkn sukkaarra kiiloon tokko daldaltoonni qarshii 35 yemmuu gurguran TPLF immoo sukkaara kiiloo tokko qarshii 17 gurgura. Garagarumma gatii sukkaaraa umame kana irratti researchin dalagame akka armaan gadiitti ibsa 1 gatii sukkaaraa daldaltoota biraa qarshii 35 akka ta'u kan godhe TPLF 'n taxi gosa addaa addaa yeroo adda addaatti baafame daldaalaan 100 Gati alaa mi'i sun bitame daldaalaan akka kaffalu gochuu isaa mirkaneessa. Kunis TPLF qarshii 17 kan inni gurguruuf, gati gabaa addunyaati bitutti baasii geejjiba fi bu'aa buufachuu qabu qofa herregata malee taxi waan kaffalu hin qabu kanaaf gati gadi bu'aan gurgura.
Kara hima herregaatiin yoo ilaalle; TPLF sale price sugar imported = price of sugar bought from abroad ( +) transportation cost (+) profit generated +(0) taxi expenses = 17 birr/killo this for TPLF. Traders sale price of sugar imported from abroad =sugar price from abroad(+) transportation cost (+) tax expense(normal sale price of sugar from abroad) (+ ) profit = 35birr/killo * look taxi expense create 18 birr difference. Researcherin garaagarumma gati 18 ti kan fide taxi ta'uu isaa mirkaneesseera. Baasiin gibiraa kun hagana olka'uu isaa erga hubannee ummata keenya irra miidhaa hagamii akka ga'aa jiru akka armaan gaditti ibsama 1 motummaan tplf daldaaltoti akka hojii hiikanii fi kasaaran godheera 2 mi'oota biroön irratti illee taxin kun waan kaffalamuuf uummata TPLF n saamaa jira, 3 ummatis ta'e daldaalan tplf'n saamamaa waan jiruuf TPLF hojii ummata harkaa balleessaa jira malee hojii dhabaaf hojii umaan jira jedhe miidiyaan kan inni dabarsu kijiba ta'uu isaa. 4 TPLF daldala fi bu'aa guddaaakka argachaa jiru dhugoomsa.
Innii 3ffaan barataa dha motummaan TPLF yeroo ammaa kan barattoota oromoo kan unversity fi kolleejjiiti ba'a dhibba keessaa 10% ramadaa jira, 90% kanneen ta'an kaan gaaddisa mukaa taa'aa ola, kaan biyya hambaatti osoo godaanuu galaanan nyaatama,beelaa bosona keessatti du'aa jira. Gabaabumaa barataan eebbifame unversty fi kolleejjiiti ba'a jiru hojiin kennamuuf TPLF'n gurma'anii dhagaa cabsuudha ykn cobistone hojjechuudha ,....... Egaa rakkoowwan saba oromoo mudata jira kana erga hubate booda researcherin kun ummati oromoo tplf’n of irra qolachuuf maal gochuu akka qabu ykn recomandation yeroo biraan dhiyeessa.....( Itifufa)